Car mgbazinye ụgbọelu Barcelona Airport | Jiri ụgbọ njem ụgbọ oloko Barcelona - Carrentalchoice
Ụgbọ ala ụgbọ ala na Barcelona Airport
Gịnị mere eji eji ụgbọ ala na ọdụ ụgbọ mmiri Barcelona?
Chekwa oge na ego mgbe ị na-eleta ma na-ejegharị na obodo Barcelona
Mfe ịkwụsị ụgbọ ala gị na ebe ọzọ
Nwee nnukwu onyinye mgbe ị na-ede akwụkwọ Ụgbọ njem ụgbọ ala Barcelona online
Site na mgbazinye ụgbọ ala na Barcelona, ​​ị nwere ike ịhụ ebe kachasị mma n'obodo ma nwee ike ịgafe n'ụsọ osimiri Mediterranean.
Anyị na-enye Car mgbazinyeghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ ezoro ezo.
Ntuziaka Ịkwọ ụgbọ ala ụwa Barcelona
Spanish holidays rank among the most popular for British holidaymakers - karịrị 12 nde anyị isi n'ebe ahụ kwa afọ! Anyị na-atụgharị ọtụtụ puku azụmahịa maka ụgbọala maka ndị ahịa anyị na-eleta mpaghara niile nke mba ahụ, site na ndị chọrọ njem iji gaa na osimiri na obodo ndị dị na Costa del Sol, ndị na-achọ ụkwụ ha ka ha na-aga n'etiti ntụrụndụ ski na Pyrenees.
Ịkwọ ụgbọala na Spain dị mma. N'ozuzu, okporo ụzọ dị mma, nke na-adịghịkwa emetụ ala karịa ndị nọ n'ụlọ. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ iwu na mkpokọta ntụle ị kwesịrị ịmara tupu ị ịgbazite ụgbọ ala Barcelona - nke a bụ ihe ị ga - ele anya:
Ụgbọ njem ụgbọala Barcelona Spain Driving Law:
Mbanye n'akụkụ aka nri nke ụzọ.
Iji ekwentị mkpanaka ejidere aka mgbe ịkwọ ụgbọala na-akwadoghị.
Seatbelts dị mkpa maka ndị njem niile. Ụmụaka nọ n'okpuru afọ 12 ga-aga azụ ma ọ bụrụ na ha nwere oche ụmụaka kwesiri ekwesịrị, ọ ga-abụrịrị na ọ bụla ndị njem ga-aga n'okpuru 135cm ogologo. Ọ bụrụ na ịchọrọ oche oche, rịọ ha mgbe ị na-ede akwụkwọ nkwụnye ego gị ma anyị ga-ahaziri gị maka gị.
Ọ bụ ihe iwu kwadoro ka ị na-ebu uwe eletrik na ụgbọ ala gị ma nke a ga - enye gị ụlọ ọrụ mgbazinye - ị gaghị enwe ike ibute nke gị!
Ihe ọṅụṅụ mmanya / ịgba chaa chaa na Spain bụ 0.5mg nke mmanya site na milliliter ọbara nke dị ala karịa njedebe UK nke 0.8. Ọ dị mfe ịnweta ókè a ka ọ bụrụ ihe kacha mma iji zere ịṅụ mmanya mgbe ị na-ezube ịkwọ ụgbọala - ndị ọchịchị na-aṅụ mmanya-na-akwọ ụgbọala nke ukwuu ma na-enye ntaramahụhụ ike dị njọ.
A na-elele anya ngwa ngwa site na ndị ọchịchị, a na-ejikwa radars na mba dum. Ngalaba ọsọsọ bụ:
Ụzọ ụgbọ ala: 120km / h (74mph)
Okporo ụzọ mepere emepe: 90-100km / h (55-62mph)
Obodo: 50km / h (31mph)
Ịgbaji ha bụ ihe dị njọ ma bụrụ ndị ọkwọ ụgbọala nwere ike ịchọta ebe ha ga-agba ọsọ ọsọ ọsọ ma mee ka ọ dị mfe - ị nọ na ezumike!
Ịgaghị eji ihe ngosi na okporo ụzọ moto bụ mpempe okporo ụzọ ma nwee ike ị nweta gị ọrụ ọma. Ọ bụrụ na ịnweta ihe ọma maka ihe ọ bụla, jụọ onye na-esetị gị maka akwụkwọ azụmahịa.
Ịgbazite ụgbọ ala Barcelona Airport General Guidance:
Dabere n'otú ị na-esi eme atụmatụ ezumike gị, ị nwere ike ịchọrọ ụgbọ elu iji buru egwuregwu egwuregwu oyi. Mee ka anyị mata ihe dị gị mkpa mgbe ị na-ede ụgbọala gị ma anyị ga-ahụ na ọ haziri gị.
A maara ụgbọala dị ka 'Autopista' na ụzọ mgbagwoju anya dị ka 'Autopista de Peajes' - debe ego maka gị maka ụlọ ọrụ ọ bụla.
Were akwụkwọ ikike gị, ID, mgbazinye na akwụkwọ inshọransị gị n'oge niile. Ọ bụrụ na ị nwere ihe mberede, buru nkọwa nke ọkwọ ụgbọala ọ bụla ọzọ ma kọọrọ ya onye na - ahụ maka gị ozugbo.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ya, nọmba ọrụ mberede na Spain bụ 112.
A na-agbanyekarị nkedo na Spen ka ị nwee ike ịnya ụgbọala ahụ, ma ọ bụrụ na ịchọta ndụmọdụ ọ bụla ma ọ bụ chọpụta usoro iwu ọ bụla anyị edebeghị, biko mee ka anyị mara na anyị ga-etinye ha na ndu a. Nwee nnukwu njem! info@carrentalchoice.com
Barcelona-El Prat Airport bụ ọdụ ụgbọelu mba dị na 12 kilomita n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke etiti Barcelona, ​​Spain.
Adreesị: 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, ​​Spain
Usoro: BCN Ndị elu: 3.8 m
Onye nwe: ENAIRE
Ekwentị: + 34 902 40 47 04
Province: Province nke Barcelona
Ebe ọdụ ụgbọ mmiri dị na Barcelona
Ebe ụgbọ ala ụgbọ elu dị elu na Spain:
Ụgbọ ala ụgbọala Alicante Airport